False Pregnancy,Pseudocyesis - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သားအိမျထဲမှာ သန်ဓသေားမရှိဘဲ ကိုယျဝနျရှိသကဲ့သို့ လက်ခဏာတှေ အကုနျခံစားရတဲ့ စိတျကူးယဉျကိုယျဝနျလို့ အမညျတပျတဲ့ အခွအေနတေဈခုရှိပါတယျ။ ဆေးပညာအချေါအဝျေါအရတော့ Pseudocyesis လို့ချေါပါတယျ။
ရာသီမပျေါခွငျး၊ သို့သျော ဆီးစဈတံနှငျ့စဈကွညျ့လြှငျ တဈကွောငျးသာပျေါခွငျး
(အခြို့အမြိုးသမီးမြားတှငျ ရာသီမလာခွငျးဟာ တဈလနှဈလလောကျထိဖွဈနိုငျသလို…. ရှဈလ ကိုးလထိ ရာသီမလာတာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။)
ဒီအခွအေနဟော ဘယျလိုလူတှမှော ဖွဈနိုငျခမြေားလဲ?
ယခငျက ကိုယျဝနျဖကျြခထြားဖူးပွီး ယခုအခါမှ ကလေးလိုခငျြနသေူမြား
ယခငျက တဈကွိမျထကျပို၍ ကိုယျဝနျပကျြကဖြူးသညျ့ ရာဇဝငျရှိသူမြား
ကလေးဆုံးရှုံးဖူးသူမြား (ကလေးဆုံးပါး ၊ပြောကျရှ… စသဖွငျ့)
ဦးနှောကျအတှငျး ဓာတုပစ်စညျး Chemical မမြှတမှုဖွဈနသေူမြား
ဆီးစဈကွညျ့တဲ့ အခြိနျတိုငျး တဈကွောငျးသာပျေါမယျ။
အာထရာဆောငျးရိုကျကွညျ့ရငျ သားအိမျထဲမှာ ကလေးမတှရေ့ပါ။ (အာထရာဆောငျးအဖွကေတော့ စိတျကူးယဉျကိုယျဝနျနဲ့ ကိုယျဝနျအစဈကို ခှဲခွားပေးမယျ့ အရေးပါဆုံးစဈဆေးမှုလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။)
ဒါကွောငျ့ မိမိမှာ ဒီလို လက်ခဏာတှနေဲ့ ရှိနမေယျ မသမေခြာဖွဈနမေယျဆိုရငျ ကိုယျဝနျနုစဉျတညျးက သခြောစမျးသပျပါ..
မိမိမှာ ပွောခဲ့သလို ကိုယျဝနျတု(စိတျကူးယဉျကိုယျဝနျ) ရှိနပေါက လကျခံနိုငျသော စိတျအစဉျကို ထားပါ..
တခြို့သော အမြိုးသမီးမြားတှငျ ရောဂါအခံတဈခုခုကွောငျ့ဆိုတာထကျ စိတျကွောငျ့ဖွဈတဲ့အခွအေနမေို့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာကုသမှုနဲ့ မိသားစုဝငျမြားရဲ့ နှဈသိမျ့အားပေးမှု အဓိကလိုအပျပါတယျ။
မှနျကနျသော ကုသမှုနှငျ့ နှဈသိမျ့ဆှေးနှေးမှုပေးနိုငျပါက သခြောပြောကျကငျးနိုငျပီး နောကျထပျကိုယျဝနျအစဈအမှနျရနိုငျဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားပါတယျ…
သားအိမ်ထဲမှာ သန္ဓေသားမရှိဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိသကဲ့သို့ လက္ခဏာတွေ အကုန်ခံစားရတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်ဝန်လို့ အမည်တပ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဆေးပညာအခေါ်အဝေါ်အရတော့ Pseudocyesis လို့ခေါ်ပါတယ်။
ရာသီမပေါ်ခြင်း၊ သို့သော် ဆီးစစ်တံနှင့်စစ်ကြည့်လျှင် တစ်ကြောင်းသာပေါ်ခြင်း
(အချို့အမျိုးသမီးများတွင် ရာသီမလာခြင်းဟာ တစ်လနှစ်လလောက်ထိဖြစ်နိုင်သလို…. ရှစ်လ ကိုးလထိ ရာသီမလာတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
ဒီအခြေအနေဟာ ဘယ်လိုလူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်ချေများလဲ?
ယခင်က ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချထားဖူးပြီး ယခုအခါမှ ကလေးလိုချင်နေသူများ
ယခင်က တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျဖူးသည့် ရာဇဝင်ရှိသူများ
ကလေးဆုံးရှုံးဖူးသူများ (ကလေးဆုံးပါး ၊ပျောက်ရှ… စသဖြင့်)
ဦးနှောက်အတွင်း ဓာတုပစ္စည်း Chemical မမျှတမှုဖြစ်နေသူများ
ဆီးစစ်ကြည့်တဲ့ အချိန်တိုင်း တစ်ကြောင်းသာပေါ်မယ်။
အာထရာဆောင်းရိုက်ကြည့်ရင် သားအိမ်ထဲမှာ ကလေးမတွေ့ရပါ။ (အာထရာဆောင်းအဖြေကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ကိုယ်ဝန်နဲ့ ကိုယ်ဝန်အစစ်ကို ခွဲခြားပေးမယ့် အရေးပါဆုံးစစ်ဆေးမှုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။)
ဒါ​ကြောင့်​ မိမိမှာ ဒီလို လက္ခဏာ​တွေနဲ့ ရှိ​နေမယ်​ မ​သေမချာဖြစ်​​နေမယ်​ဆိုရင်​ ကိုယ်​ဝန်​နုစဉ်​တည်းက ​သေချာစမ်းသပ်​ပါ..
မိမိမှာ ​ပြောခဲ့သလို ကိုယ်​ဝန်​တု(စိတ်​ကူးယဉ်​ကိုယ်​ဝန်​) ရှိ​နေပါက လက်​ခံနိုင်​​သော စိတ်​အစဉ်​ကို ထားပါ..
တချို့​သော အမျိုးသမီးများတွင်​ ရောဂါအခံတစ်ခုခုကြောင့်ဆိုတာထက် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေမို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုနဲ့ မိသားစုဝင်များရဲ့ နှစ်သိမ့်အားပေးမှု အဓိကလိုအပ်ပါတယ်။
​မှန်​ကန်​​သော ကုသမှုနှင့်​ နှစ်​သိမ့်​​ဆွေး​နွေးမှု​ပေးနိုင်​ပါက ​သေချာ​ပျောက်​ကင်းနိုင်​ပီး ​နောက်​ထပ်​ကိုယ်​ဝန်​အစစ်​အမှန်​ရနိုင်​ဖို့ ရာခိုင်​နှုန်းများပါတယ်​…